रवि लामिछानेले फेसबुक अकाउन्टमा यस्तो के लेखे जुन् लेख्न साथै भ्यो भाइरल ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रवि लामिछानेले फेसबुक अकाउन्टमा यस्तो के लेखे जुन् लेख्न साथै भ्यो भाइरल !
रवि लामिछानेले लोकप्रियता पाउन धेरै समय लिउनु भएन । किनभने रवि लामिछानेले गरेको काम र तेस्को पृष्ठभुमि नै तेस्तो छ जसले सर्वसाधारणलाई आफूतिर तान्छ । रवि लामिछानेले गरिब, दुखि देखिको विषय आफ्नो कार्यक्रममा उठाएर गरिब दुखीको साथ् पाए ।
रवि लामिछानेले पैसा भएका पढ्नलाई विदेश जान खोज्ने तर दलालहरुले गर्दा ठ्ग्गीनेहरुको पनि आवाज आफ्ना कार्यक्रममा उठाएपछि ति विद्यार्थी र तिनीहरुका परिवारको साथ् पनि पाए । रवि लामिछानेले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने बेला ठग्ने दलालहरु विरुद्ध पनि कडा आवाज उठाए अनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको समर्थन पनि पाए ।
विदेशमा बेचिएकी चेलीहरुलाई आफ्नो कार्यक्रम मार्फत नेपाल फिर्ता सम्म गराए । यस्तै धेरै काम गराउन र धेरैको आवाज उठाउनले रवि लामिछानेको कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संग र रवि लामिछाने नेपाली जनतामा लोकप्रिय हुन् सफल भए । अहिले विगतमा सालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा बस्नु पर्यो ।
हिरासतमा बसेर बद्नाम हुनको सट्टा रवि लामिछाने झन स्टार बनेर निस्किए । यसको उदाहरण छ उनले धन्यवाद गरेको सभामा आएको जन सागर । आर्को उदाहरण हो अहिले उनले गरेको १ पोस्ट जुन पोस्ट एकाएक भ्यो भाइरल । रवि लामिछानेले लेखेको उक्त स्ट्याटस तल जस्ताको तेस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ ।